Football Khabar » कोपा अमेरिकाबारे रोनाल्डोको यस्तो भविष्यवाणी !
कोपा अमेरिकाबारे रोनाल्डोको यस्तो भविष्यवाणी !
ब्राजिलियन लिजेन्ड खेलाडी रोनाल्डो नाजरियोले आफ्नो देशमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलको सम्भावित विजेताबारे भविष्यवाणी गरेका छन् । हालसालै एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै उनले विभिन्न विषयमा बोल्दै कोपाबारे पनि धारणा राखेका थिए ।
रोनाल्डोले यसपटक कोपामा ब्राजिललाई सबैभन्दा प्रमुख उपाधि दाबेदार टिम मानेका छन् । ब्राजिलले उपाधि जित्ने थुप्रै आधार रहेको उनको भनाइ छ । उनले क्वार्टरफाइनलमा रहेका ८ टिममध्ये सबै हिसाबले ब्राजिल उपाधि जित्न सक्षम रहेको पनि बताए ।
‘मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने यसपटक ब्राजिल सबै हिसाबले उपाधि जित्न सक्षम छ,’ रोनाल्डोले भने, ‘मैले ब्राजिलजत्तिको टिम यस प्रतियोगितामा अरू देखेको छैन ।’
उनले अघि थपे, ‘टोलीमा अहिले नेइमार छैनन् । तैपनि, टोलीमा सबै एकसे एक खेलाडी छन् । सबै पोजिसनमा उत्कृष्ट खेलाडी छन् ।’
रोनाल्डोले लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना उपाधि दौडमा रहे पनि उनीहरू उत्कृष्ट लयमा नरहेको बताए । ‘अर्जेन्टिनी टिममा मेस्सीजस्ता अद्भुत खेलाडी छन् । तर, उनीहरू कोपाको च्याम्पियन बन्ने लयमा छैनन्,’ रोनाल्डोले भने, ‘तपाईंलाई पनि थाहा छ, फुटबल टिमले खेलिन्छ । एक खेलाडी जति नै अद्भुत भए पनि टिम कहीं न कहीं चुक्छ ।’
ब्राजिलले क्वार्टरफाइनलमा पराग्वे र अर्जेन्टिनाले भेनेज्वेलाको सामना गर्दैछ । यदि यी दुवै टिमले आ–आफ्नो खेल जिते सेमिफाइनलमा ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको भेट हुनेछ ।
प्रकाशित मिति १२ असार २०७६, बिहीबार ०८:४०